Ibhedi ye-Aurora kunye nesidlo sakusasa
I-Bed & Breakfast "Aurora" ibekwe eMontorio al Vomano, kwiphondo laseTeramo. Iqhutywa lusapho ke ngoko ayinikezi kuphela abathengi indawo yokuphumla etofotofo kumagumbi amakhulu okanye kumagumbi axhotyiswe ngeenkonzo, indawo yokupaka yabucala, isidlo sakusasa kunye nayo yonke intuthuzelo kodwa kunye nokuba bucala kunye nembeko.
Isikhundla sayo kakuhle, sokuvalwa Gran Sasso kunye Monti della Laga National Park, lwathi gabhu phakathi kweentaba nolwandle, ilungele hayi kuphela abathandi ebusika ezemidlalo ngubani na ngokukhawuleza ukufikelela iiholide ski esikufutshane Prato. Selva, Campo Imperatore, Campo Felice kunye nePrati di Tivo, kodwa nakwabo bakhetha ulwandle njengoko banokufikelela ngokulula kumanzi acocekileyo onxweme lonxweme, njengalawo aseRoseto degli Abruzzi, uSilvi Marina, Alba Adriatica kunye neTortoreto.
I-B & B kwakhona likuvumela ukuba kutyelela iindawo ezininzi asebumelwaneni, esisityebi imbali, ubugcisa kunye yokupheka wengingqi: Castelli, edume iiseramikhi yawo eyodwa ehlabathini, Lake Campotosto kunye azimkrobisi nendalo ezinobuhle, engcwele of San Gabriele kunye Fortress of Civitella. del Tronto, isiseko sokugqibela sokukhusela iBourbon ngexesha leMfazwe yesiThathu yokuzimela, enika ubungqina obubalulekileyo bembali kwiMyuziyam yeMfazwe.
Untywiliselwe kwiPaki yeSizwe yaseGran Sasso kunye neMonti della Laga, ene-15,000 leehektare zolwandiso, unokuthatha uhambo olude ukuze ufumane amaxhama afusi, iingcuka, iibhere kunye neentlobo zezityalo ezininzi kunye neentlobo ngeentlobo kunye nobutyebi bendalo bobunzima bazo kunye namathambeka ahlukeneyo. .. Ukuhamba ngeenyawo, ukukhwela ibhayisekile ezintabeni, ukukhwela amahashe kunye nokutyibiliza ekhephini zezinye zezinto ezimbalwa ezingenakubaleka eziza kwenziwa kwilizwe lethu!
I-b & b yethu inabela ngaphaya kwemigangatho emithathu, ineebhedi ezili-10 ezahlulwe zaba ngamagumbi amancinci. Igumbi ngalinye linegumbi lokuhlambela labucala, ukufudumeza kunye ne-air conditioning. Esi sakhiwo sinendawo yokupaka yabucala.
Iindwendwe ziya kuba nako ukubala ekufumanekeni kwabanini kwaye ziya kuba nezitshixo zegumbi labo zikhoyo kulo lonke ixesha lokuhlala kwazo, ukuze ziqinisekise ubumfihlo kunye nenkululeko, ngaphandle kwesidingo sokuzinikezela kwindawo yolwamkelo rhoqo xa zithatha isigqibo sokuhamba.
Iindwendwe ziya kuba nako ukubala ekufumanekeni kwabanini kwaye ziya kuba nezitshixo zegumbi labo zikhoyo kulo lonke ixesha lokuhlala kwazo, ukuze ziqinisekise ubumfihlo kunye nenk…